फेवाताल बचाउने ड्याम नै गुणस्तरहीन ! | Nepal123.com
Author: Binod Dhakal Published Date: February 14, 2020 LeaveaComment on फेवाताल बचाउने ड्याम नै गुणस्तरहीन !
२ फागुन, पोखरा । खहरे खोलाबाट फेवातालमा मिसिने ढुंगा र माटो छेक्न बनाइएको सिल्ट्रेसन ड्याम गुणस्तरहीन पाइएको छ ।
← विद्यार्थीलाई झोला र शैक्षिक सामाग्री वितरण
रसुवागढि नाका थप सात दिनका लागि बन्द →